“ပြဒါးပျယ်နေတဲ့မှန်ထဲမှာ စလေအညာက ပုလွေဆရာ့နောက်လိုက်ကြွက်တွေကို တွေ့လိုက်တယ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ပြဒါးပျယ်နေတဲ့မှန်ထဲမှာ စလေအညာက ပုလွေဆရာ့နောက်လိုက်ကြွက်တွေကို တွေ့လိုက်တယ်”
“ပြဒါးပျယ်နေတဲ့မှန်ထဲမှာ စလေအညာက ပုလွေဆရာ့နောက်လိုက်ကြွက်တွေကို တွေ့လိုက်တယ်”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Oct 26, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 26 comments
“ပြဒါးပျယ်နေတဲ့ မှန်ထဲမှာ စလေအညာက ပုလွေဆရာ့နောက်လိုက်နေတဲ့ကြွက်တွေကိုတွေ့လိုက်တယ်”
၁၉၆၂ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၁ခုနှစ်အထိ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ
နေခဲ့ရတဲ့ ကျနော်တို့အဘို့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာလေးတွေ နဲ့ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်လေးတွေ
လက်လွတ် ဆုံးရှုံးမှာကို စိုးရွှံတဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာနေလာခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲဒီစ်ိတ်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်တာတွေ
တစထက်တစ မသိမသာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါဘဲ။
အဲလိုသွားရတာကို ကျက်သရေမရှိ မင်္ဂလာမရှိ လို့သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။
ဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတည်းက အရိုးစွဲနေအောင်ကြောက်ခဲ့ကြတာပါ။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းက သုံးစွဲလာခဲ့တဲ့ ဥပဒေ-ဓမ္မသတ်အတော်များများဟာ စကားလုံးခန့်ထည်မူ့နဲ့အတူ ကျနော်တို့သာမန်လူတွေနားမလည်နိုင်လောက်တဲ့ ထည်ဝါလှတဲ့ ပြောဆိုသုံးနုန်းတာတွေကြောင့်
တကယ်လဲ မေးတာကိုသေချာနားလည်ဘဲ ကြောက်ကြောက်ရွှံ့ရွှံနဲ့ ဟုတ်ကဲ့မိလို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာ
တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးမေးမြန်းကြတဲ့အခါ အပြန်အလှန်မေးကြတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကို
နားမလည်တာကို လည်အောင် မကြုိးစားတတ်တဲ့ကျနော်တို့မြန်မာတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း သိတယ်တတ်တယ်ထင်တဲ့သူကိုဘဲ အားကိုးကြပါတော့တယ်။
အမူ့အခင်းရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ကိုယ်ဆရာတင်တဲ့လူက ခြယ်လှယ်တာကို ခံရပါတော့တယ်။
အဲတော့ သူပြုသမျှ နုရသလို လည်စင်းပေးရပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ရုံးပြင်ကန္နားဆိုတာ ကျနော်တို့မြန်မာတွေအတွက်မသွားအပ်တဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့။
ဒီတော့လဲ အမူ့ကိစ္စရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ရုံးမရောက် ဂါတ်မရောက်ခင် အပြင်မှာတင်ကျေအေးလိုက်တတ်ကြပါတယ်။
အဲလိုရုံးပြင်ကန္နားနဲ့မယဉ်ပါးတော့ ဗဟုသုတနည်းပါးတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေအမြင်မှာရုံးဝန်ထမ်းတွေ
ကို သီးသန့်လူတန်းစားတွေ အလေးအမြတ်ပြုစရာ ပညာတတ်လူတန်းစား လို့ သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတယ်။
အဲတော့ ရုံးရောက်တာနဲ့ တံခါးပေါက်စောင့်တဲ့ ပြာတာ ကစပြီးကြောက်နေတယ်ဆိုတော့ ဟိုးအထက်ကလူများ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုတာ ပြည့်သူ့အစေအပါး ဘာညာကွိကွ နဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေအမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုခဲ့ပေမယ့်
လက်တွေ့ ဘ၀မှာတော့ ကျနော်တို့လိုသာမန်လူတန်းစားများအတွက် တော့ သူတို့ရှေ့ရောက်ရင်
ကျားရှေ့ရောက်တဲ့ သမင်လို အရိပ်အကဲကြည့်နေခဲ့ရတာလဲအမှန်ပါဘဲ။
မှားမှန်းသိနေ မမှန်မှန်းသိနေပေမယ့် ပြန်ပြောခွင့်မရှိ ပြန်မပြောရဲတဲ့ အနေအထားမှာ
ရုံးကိစ္စရှိခဲ့ရင် ကိုယ့်ကိစ္စမပြီးမချင်း သူတို့ကိုမျက်နှာချိုသွေးနေခဲ့ရပါတယ်။
သူတို့ငြိုငြင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိစ္စက မပြီးနိုင်တော့ပါဘူး။
အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုအတွက်လိုအပ်ချက်တွေက ဘာလဲဆိုတာ ကို အတိအကျမသိ ပြန်တော့
ဟိုဟာလိုတယ် ဒီဟာလိုတယ် စာရွက်စာတမ်းမစုံသေးဘူးပြောလဲ ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ
လိုတာမလိုတာ ကိုယ်ကမှရေရေ ရာရာ မသိတော့ သူတို့ပြောသမျ လက်ခံလိုက်ရတာပါဘဲ။
ရုံးတွေကိုသွားတဲ့အခါ မသိလို့ မေးစရာလူမရှိ။
ဒီလောက်လေးမှမသိဘူးလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ ဟောက်သူလဲရှိ ဆိုပြန်တော့ ကြောက်မယ်ဆိုလဲကြောက်ထိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် အစိုးရရုံးတွေမှာ လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့သွားတဲ့အခါ ကိုယ်ဘက်က ဘယ်လောက်အရေးကြီးကြီး သူတို့ဘက်ကတော့အေးဆေး။
အခွန်အတွေဆောင်တဲ့အခါ ဘဏ်မှာငွေအထုတ်အသွင်းလုပ်ရတဲ့အချိန်တွေမှာစာတိုက်မှာ အမြန်ချောနဲ့ စာပို့တဲ့အခါ ရထားတလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါ တန်းစီရပါတယ်။
ကျနော်တို့ကသာ အပြင်မှာသွေးတောင့်အောင်မတ်တပ်ရပ်စောင့်နေရပေမယ့် သူတို့အချင်းချင်းကတော့
ညက ကြည့်ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားကားကိုစားမြုံ့ပြန်လို့ မ၀နိုင်အောင်။
တစ်ခါသားမှာ ကျနော်စက်ရုံတစ်ခုမှာ ပစ္စည်းထုတ်ခွင့်ရဘို့အတွက် လျောက်လွှာသွားတင်ရပါတယ်။
ငွေကြိုသွင်းပြီးသား ပစ္စည်းကိုထုတ်ခွင့်ရဘို့အတွက် ပါမစ် သွားပြီးလုပ်ရတာပါ။
ကျနော်ရောက်တော့ ပါမစ်ကိုလက်ခံပြီး ထုတ်ခွင့်ရေးပေးရမယ့် ၀န်ထမ်းအမကြီး ကရွက်ဆုတ် ပြက္ခဒိန်ကိုတစ်ရွက်ခြင်းလှန်နေတာတွေ့ပါတယ်။
ကျနော်သူ့စားပွဲရှေ့ရောက်တော့ မော့ကြည့်ပြီး “ခဏစောင့်”လို့ပြောပြီး ဆက်ကြည့်နေပြန်ပါရော။
အတော်လေးကြာတော့ မှ“တွေ့ပြီ တွေ့ပြီ “ လို့အော်ပြီး သူ့ရုံးက ၀န်ထမ်းကောင်မလေး ကိုလှမ်းခေါ်ပါတယ်။
ကောင်မလေးရောက်လာတော့ “တော်ပါသေးတယ်အေ့ သမီးလေးစာမေးပွဲပထမရက်က ရက်ရာဇာအေ့
ပြဿဒါးဖြစ်မှာစိုးလို့ရှာလိုက်ရတာ မောနေတာဘဲ” အစချီလို့ ဘာညာကိစ္စတွေပြောလို့ ၀မှ
အလုပ်ကိစ္စအကြောင်းပြောပြတော့ နက်ဖြန်မှ လာထုတ်တော့လို့ပြောပါတယ်။
အော် ကျနော်မှာတော့ရုံးကိစ္စအတွက် များ ပြက္ခဒိန်ကြည့်နေတယ်ထင်မိတာ မှားပေါ့ နော်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အရင်လိုမဆိုးပေမယ့် စိတ်တိုင်းကျလောက်အောင်တော့ မရောက်သေးတာအမှန်။
အစိုးရဘဏ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ နံရံမှာ “ဆေးလိပ်မသောက်ရ”လို့ရေးထားပေမယ့် အဲဒီဘဏ်ကလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကတော့ စီးကရက်ကို ဟန်ပါပါခဲလို့ နေရာအနှံ့လျောက်သွားနေတာကိုမြင်ရတာ သူများမေးငေ့ါစရာ။
အခုချိန်မှာတော့ ဒီအချိုး ဒီပုံစံလေးတွေက အတော်အသင့်ပျောက်သွားပြီဆိုပေမယ့်
****************** **************************** *******************
အဲလိုလုပ်ရကိုင်ရ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကြောင့်လဲ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဆိုတာကြီးက
(ဟိုဘက်စားပွဲကနေ ဒီဘက်စားပွဲကို စာလေးတစ်စောင်ရောက်ဘို့ အကြာကြီးစောင့်ရတာမျိုးပေါ့)
အဲတော့ သူတို့နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ လူတွေက ပွဲစား(လှပစွာသုံးရင်အကျုိးတော်ဆောင်ပေါ့)
ဟုိူးအရင်က လာဘ်ယူတယ်ဆိုတာ တိုးတိုးတိတိတ် နောက်ဖေးပေါက်က၀င်ရတာမျိုး။
အထက်က လူကို လာဘ်ပေးဘို့အတွက် ကြားလူကို (အပေါက်စောင့်လိုဟာမျုိး) လာတ်ထိုးရတာမျိုး
လာဘ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတောင်သုံးဘို့ မသင့်တော့ပါဘူး။
အကျိုးဆောင်ခ လို့ ခေါ်ရတာပေါ့။
တောင်းလို့မှ မပေး ရင်ဗြောင်ချောင်ထိုးတဲ့တစ်ခေတ်ကို ရောက်ခဲ့ကြရတာလဲအမှန်။
ဘယ်နေရာမှာ မဆို “ဂါ” မှာ “မဂါရင် မပါဘူး”ဆိုတာတွေက တကယ့်အဖြစ်မှန်။
ဒီလာဘ်လာဘ်ယူကိစ္စမှာတော့ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းဆိုတာ အရိုးကပ်နေတဲ့အနံ့ရှူကြည့်ရသလောက်ပါဘဲ။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဆုိးဝါးလှတဲ့လာဘ်လာဘ်ယူကိစ္စကို လျော့နည်းပပျောက်ဘို့ကြုိးစားနေပါတယ်။
ဒီကိစ္စအောင်မြင်ဘို့ဆိုတာကတော့ “ထောင်မြင်လို့ရာစွန့် တတ်သူတွေ တစ်ကောင်ချကျွေးပြီး နှစ်ကောင်စားလို့ ကင်းဝင်တတ်သူ”တွေနဲ့ “မျှော်လင့်နေတဲ့မျက်လုံး ပိုင်ရှင် ”တွေရှိနေသမျှကာလပါတ်လုံး ပပျောက်ဘို့ လမ်းမမြင်ပါဘူး။
ပေးသူက ကြောက်ပြီးအလွယ်တကူပေးနေသမျှ စားတဲ့သူကလဲ မကြောက်မရွှံကြီးကို စားနေသမျှကာလာပါတ်လုံး ဒီ လာဘ်စားတာကြီးက ရှိနေအုံးမှာဘဲ။
&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&
ဟုိုအရင် မဆလခေတ်မှာ အမြဲကြားရလေ့ရှိတဲ့စကားလုံးလေးတွေက
နေရာတကာမှာ “ဥက္ကဌကြီး” “ပါတီသဘောတရားရေးရာ” “အညမည” “ တင်းပြည့်””အရန်ပါတီဝင်”
“ရှေ့ဆောင်လူငယ်” “လမ်းစဉ်လူငယ်” “လုပ်အားပေး” “ထောက်ခံ” “ဆန္ဒခံယူပွဲ” “ဗွီအိုင်ပီ“အူမတောင့်မှသီလစောင့်”“ဇူဇကာ” “ပါတီလမ်းညွှန်မှု့” “ကော်မီတီ”ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေက
တကယ့်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘ၀တွေမှာတော့ “မှောင်ခို” “ခွဲတမ်း” “မဲပေါက်” “တန်းစီတိုး”
“ ရာနှုန်းပြည့် ထောက်ခံတယ် “ ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါဘဲ။
တောင် ဒီလို ထောက်ခံတဲ့အထဲမှာ ကျေနပ်စွာပါဝင်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါဘဲ။)
ဆန္ဒခံယူပွဲ အတော်များများမှာ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးထောက်ခံ
တယ်လို့ထင်ရလောက်အောင်ကို “ရာနူန်းပြည့်” စကားလုံးကို ကြားနေရပါတယ်။
ဒီထောက်ခံတာနဲ့ပါတ်သက်လို့ ကျနော်မှတ်မိတာလေးတစ်ခုပြန်ပြောရရင် တစ်ခါက တက္ကသိုလ်မှာထောက်ခံပွဲ
တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါ ဆရာတစ်ယောက်က မထောက်ခံဘူးလို့ဆိုပြီး နေပါသတဲ့။
အဲဒီ ကျန်တဲ့ ဆရာဆရာမတွေ က “ဆရာကြီး ထောက်ခံရင်ကျမတို့ဌာနက ရာနူန်းပြည့်ဘဲ”
အဲဒီအခါ ဆရာကြီးက “တိုင်းပြည်ကိုချောက်ထဲရောက်အောင်တွန်းပို့တဲ့အထဲငါမပါချင်ဘူး”လို့ပြန်ဖြေတော့
“ဆရာကြီး သိပ်ခေါင်းမာတာဘဲ”လို့ ကွယ်ရာမှာမေးငေ့ါခံရပါသတဲ့။
အဲဒီဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲကတော့ ဆရာကြီးကို နယ်တက္ကသိုလ်မှာ တာဝန်ပြောင်းပြီးထမ်းဆောင်
ဘို့ အမိန့်စာမချခင် ပန်းနာရောဂါရှိတဲ့အတွက်မြေလတ်ပိုင်းက တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကို ချထားပေးဘို့တောင်းဆိုတဲ့အခါ “မြစ်ကြီးနား”မြို့ကို ပို့လိုက်တော့ ဆရာကြီးက နုတ်ထွက်စာတင်
တိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်မှ စာအသင်ကောင်းတဲ့ တပည့်တွေကို ဗဟုသုတတွေဖြန့်ဝေပေးနိုင်တဲ့
အဲဒီအချိန်ကစလို့ အမြစ်တွယ်ခဲ့တဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုကတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာရင်
ကန့်ကွက်နေလဲ အလကား မြန်မြန်ထောက်ခံ မြန်မြန်နားအေးတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေဝင်လာတာပါဘဲ.။
အဲဒီကာလက အနိမ့်ဆုံးရပ်ကွက်လူကြီးရွေးတာတောင်မှ သူတို့ရွေးထားပြီးသားလူကိုထောက်ခံခိုင်းတဲ့
အဲတော့ ကျနော်တို့စိတ်ထဲမှာ ငါတို့ပြန်ပြောနေ ကန့်ကွက်နေလဲ လေကုန်တာသာအဖတ်တင်တာဘဲရှိမှာပါ
ဆိုတဲ့ စိတ်တွေက ပိုခိုင်မာလာပါတယ်။
အဲတော့ သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ကြေညာချက်တွေ ဘာတွေညာတွေကို ဖတ်တဲ့အလေ့အကျင့်မရှိသလောက်ပျောက်သွားပါတယ်။
သိအောင်ဖတ်နေလဲ မထူးပါဘူးကွာဆိုတဲ့ အတွေးက ရင်ထဲမှာစူးနစ်စွာကျန်နေပါတယ်။
အဲဒီကနေရလာတဲ့ အကျင့်ဆိုးတစ်ခုက ဘာဖြစ်ဖြစ် စာမဖတ်ဘဲလက်မှတ်ထိုးတတ်ကြတာပါဘဲ။
မကြာခင်ကာလအတွင်းမှာနိင်ငံတကာနဲ့ ဆက်စပ်ပါတ်သက်လို့ အလုပ်တွေလုပ်ကြရတော့မှာသေချာနေပြီ။
ဒီအချိန်မှာ ဟိုအရင်ကလို စာချုပ်ကိုသေချာမဖတ်ဘဲ လက်မှတ်ထိုးမိလို့ကတော့ နာဘို့သာပြင်ပေတော့
အဲနောက်တစ်ချက်က ဘာဖြစ်ဖြစ်သေချာမသိဘဲ မျက်စေ့စုံမှိတ်ထောက်ခံတတ်တဲ့အကျင့်လေးကိုလဲပြင်ဘို့လိုတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@
အဲဒီပုလွေဆရာနောက်ကို မြို့ထဲကကြွက်တွေလိုက်သွားတာကိုတော့ မှတ်မိနေပါတယ်။
ငယ်ကတည်းက တွေးမိနေတာ ဒီပုလွေဆရာနောက်ကိုဘာလို့များအားလုံးလိုက်သွားကြသလဲပေါ့။
အဲဒီတုန်းက ကလေးတွေးပေါ့ ဒီလောက်လေးမှ မစဉ်းစားတတ်ကြဘူးလားပေါ့။
အခုနောက်ပိုင်းအင်တာနက်ထိုင် ဖေစ်ဘုတ်ဝင် ဟိုထဲဝင်ဖတ်ဒီထဲဝင်ဖတ်မိပါတယ်။
ပိုစ်တွေနောက်က ကော်မင်းတွေကိုလိုက်ဖတ် ကိုယ်တိုင်ပေးမိတဲ့အခါလဲပေးပေါ့။
အပေါ်က ရေးထားတာက ဟုတ်တာမဟုတ်တာ သေချာမစဥ်းစားဘဲ သူဆဲရင်ကိုယ်ပါရောယောင်ပြီးလိုက်ဆဲဆိုတာတွေတွေ့တော့
ငါတို့လဲ ပုလွေဆရာနောက်ကိုလိုက်တဲ့ ကြွက်တွေလိုဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်တဲ့အကြိမ်တွေအများကြီး”
ရေးတဲ့စာ သေချာမဖတ်ဖြစ်သေးလို့ ဖတ်ချင်နေတာ..ဖတ်ရှု့အားပေးသွားပါတယ်…
ခေါင်းစဉ်ကလည်း မိုက်တယ်….စာသားကလည်း အမှန်တွေမို့ ခိုက်တယ်…
စကာဆုထဲဝင်ရင် မုန့်ကျွေးနော်…း)
လေးပေါက်…’အောင်ပန်းမြို့က ဆွမ်းခံချိန်’ ဟိုတခါလို မန့်ပိတ်နေတယ်..
ဦးပေါက်ရေ နေရာဝင်ဦးလိုက်မယ်ဆောရီးနော် ကျွန်တော်က သင်္ဘောသား အေးဂျင့်ဗျ SECD ဆိုတဲ့နေရာမှာ အခုချိန်ထိ ဟိုးအရင်က စောက်ကျင့်တွေမပြင်သေးတာ အခုထိပဲ နောက်ပြီး အဲဒီက ဦးစီ ဘိုဂျီးဇော်မင်း ဆိုတဲ့သူဆိုရင် ရိုင်းလိုက်တာမှ တာတေလန် စစ်တပ် ဒီဇိုင်းတွေလိုလာလုပ်နေတယ် တစ်ခုခု မှားသွားရင် သူ့စားပွဲပေါ်က ပစည်းတွေနဲ့ကောက်ပေါက်တတ်တယ် ပိုက်ဆံ မယူဘူးလားဆိုတော့ယူတယ် မရစ်ဘူးလားဆိုတော့လဲရစ်တယ် အထက်က ချပေးထားတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို သူအာဏာတည်တဲ့ နေရာတစ်ဝိုက်လေးမှာ ပြင်ချင်သလိုပြင်ထားတယ် အဲလိုလူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့မိလို့ကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်နိုင်အောင်မနည်းထိန်းထားရတယ်ဗျို့ သူ့ကိုစိတ်မထင်လို့ ထသတ်မိရင် ကိုယ့် မိသားစုလဲ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ် ကိုယ်လဲ ထောင်ထဲမှာ အနေ အစားချောင်မှာ မဟုတ်ဘူး သူ့တို့ ကအစိုးရအသိုင်းအဝိုင်းဆိုတော့ ထောင်ထဲအထိတောင်လိုက် ဒုက်ခ ပေးနိုင်တယ်လေ အဲဒီတော့ ဒေါသကို အမြဲထိန်းနေရတယ်။
ပြင်ရမဲ့အကျင့်တွေကတော့ အများကြီးပဲ ဆြာပေါက်ရေ.. မွေးကတည်းက ရလာတဲ့ အကျင့်တွေဆိုတော့လည်း ခက်သား..
ကိုပေါက်ပြောတာတွေက ကျနော်တို့ ကိုယ်ဖြတ်သန်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေ
တစ်ခေတ်လုံးအရိုးစွဲလာခဲ့တဲ့ “အကြောက်တရား” ဟာအဆိုးရွားဆုံးပါပဲ…
တွေ့ ပြီ..တွေ့ ပြီ..ဆိုလို့ 
အဲဒီအကြောက်တရားက အစိုးရအလုပ်မပြောနဲ့ ကုမ္မဏီလောကထဲမှာတောင်
ရှိပါတယ် ရာထူးကြီးတဲ့သူရဲ့အမှားကို အငယ်တွေကသိသိရက်နဲ့လည်း အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်လိုက်လို့ ဖော်ထုတ်တဲ့သူသာအပြင်ရောက်
သွားတယ် အမှားကအမှန်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်တွေအများကြီး ကြာတော့
ဘာဖြစ်လာလဲဆို ဘယ်လောက်ပဲမှန်တဲ့ဘက်ကရှိပါစေ ကုမ္မဏီအကျိုးကို
ဘယ်သူကမှစွန့်စားပြီးမပြောတော့ဘူး ရေလိုက်ငါးလိုက် အလုပ်အကိုင်ကလည်း
ရေရှည်မှာအလုပ်ရှင်တွေမှာလည်း မသိမသာတစ်မျိုး သိသိသာသာတစ်မျိုး
ယူအက်စ်ရဲ့.. အစိုးရရုံးတွေလည်း.. တော်တော်ကိုဆိုးပါတယ်…။
♫♪♫ ♫ ♪ .. ♫♪♫ ♫ ♪ ♫ ♪ .. ♩ ♪ ♫ ♬ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♩ ♪♩ ♪ ♫ ♬…. ♫ ♬ ♪ ♫ ♪
လေးပေါက်ရေ မှန်လိုက်လေခြင်းရယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပုလွေဆရာနောက်လိုက်တဲ့ ကြွက်တကောင်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိပါ့။
လေးပေါက်ပြောတဲ့ လတ်မှတ်လွယ်လွယ်ထိုးကြတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြသွားပုံ ထောက်ပြသွားပုံလေးကို
ဘာမဆိုင်၊ညာမဆိုင် အဲဒီ ပုံပြင်လေး ဝင်ရွှီးဦးမယ်။
ပုံပြင်လေး ကို စသိတာက (ဒေါ်)ခင်နှင်းယု နဲ့ ဝတ္တုလေးတစ်ပုဒ်ထဲမှာ။
သူ့ယောကျာင်္းကို သဝန်တိုလွန်း တဲ့ စိတ်ရောဂါ ခပ်နုနု ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီး အကြောင်းဇာတ်လမ်းလေး ဆိုတာတော့ မှတ်မိသေးတယ်။ သူ့ဝတ္တုခေါင်းစဉ် တော့မေ့နေပြီ။
ရွာတစ်ရွာမှာ ကြွက်တွေသောင်းကျန်းလွန်းလို့ ရွာသူကြီး(လို့ဘဲဆိုပါစို့) က မှော်တတ်တဲ့ ပုလွေ ဆရာကို ငှါးပြီး ကြွက် တွေကို ရှင်းခိုင်းလိုက်တော့
ပုလွေ ဆရာ က သူ့ ပုလွေလေးကို မှုတ်လိုက်တာနဲ့ ကြွက် တွေ အကုန် သူ့နောက်လိုက်သွားတာ။
ကြွက်ရန်လဲ ရှင်းရော ရွာသူကြီးက သူ့ကို ပိုက်ဆံ အပြည့်မရှင်း တော့ဘူး။
ဒါနဲ့ သူလဲ ပုလွေလေးမှုတ် ပြီး ပြန်အသွား ရွာက ကလေး တွေ အားလုံး သူနောက် ကို လိုက်သွားကြပါလေရော။
နောက် ရွာမှာ ကလေးတွေ ပျောက်လို့ ရှာကြတော့ ရွာစပ်မှာ ငိုနေတဲ့ ကလေးလေး တွေ့မှ အကြောင်းစုံသိတယ်။
ပုလွေ ဆရာ ရဲ့ သီချင်းက အရမ်းလှပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့၊ စားစရာ ကစားစရာ တွေပေါ တဲ့ နေရာ ကို သွားကြမယ် ဆိုဘဲ။
ကလေးတွေ အားလုံး ဂူတစ်ခုထဲကို ဝင်ပြီး ပျောက်သွားသတဲ့။
သူသာ ခြေထောက် လေးမသန် လို့ နောက်ကျန်နေပြီး ဂူတံခါးပိတ်သွားတာတဲ့။
Pied Piper of Hamelin လို့ ခေါင်းစဉ်ရှိတာဘဲ။
ခြေမသန်တဲ့ ကလေးရယ်၊ နားမကြားတဲ့ ကလေးရယ်၊ စကားမပြောနိုင်တဲ့ ကလေးရယ်
ငယ်တုန်းက ပုံပြင်ကို ဖတ်ပြီး
သူများတွေနဲ့ ပါမသွားဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ ခြေမသန်တဲ့ ကောင်လေး ကို သနားလွန်းလို့…..
ခေါင်းဆောင် အသုံးမကျ ဂတိမတည်လို့ ကလေး တွေ အားလုံး ဒုက္ခရောက်ရတာလို့ တွေးမိချိန် ရောက်နေပြီး အဲဒီ ရွာသူကြီးကို ဒေါသဖြစ်နေတယ်။
Post နဲ့ ဆိုင်တာကို ဝင်မမန့်ဘဲ မဆိုင်တာ ကလိုင်ခေါက် သွားတာ စောဒီးပါ။
Post အကြောင်းလေးကို သဘောကျစွာ ဖတ်ပြီး အားပေးသွားပါတယ်။
တစ်ခြား Post တွေ ကိုလဲ ဝင်မမန့်ဖြစ်ပေမဲ့ အမြဲအားပေးပါတယ် ကပေါက်ကြီး ခင်ဗျား။ :hee:
အတွေးပါးပါးလေးကနေ အတွေးတွေပွား ပွား သွားစေချင်ပါ၏။
ခေါင်းစဉ် နဲ့စာ… လိုက်ဖတ်လည်း..ညီ….
ပေး…တတ် / ရေးတတ်လိုက်တာလို့ လည်း…တွေးမိပါကြောင်း…
စာချုပ်ကို သေချာမဖတ်ပဲနဲ့ .. လက်မှတ်ထိုးတဲ့ ကိစ္စ
အဲဒါ တော်တော်ကြီး ဆိုးဝါးပါတယ် ။ ကျုပ် ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ အထိနာခဲ့သော အဖြစ်လေးကို အားတဲ့အခါ စာဖွဲ့ ပါမယ် ။
နောက်ထပ်ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတော်တော်များများမှာ ၊ ပြင်ရမယ့် အရိုးစွဲတစ်ခုကတော့ အခမဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာမျိုးကို လက်သင့်လုံးဝမခံတာပါပဲ ။
♫♪♫ ♫ ♪ .. ♫♪♫ ♫ ♪ ♫ ♪ .. ♩ ♪ ♫ ♬ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♩ ♪♩ ♪ ♫ ♬…. ♫ ♬ ♪ ♫ ♪ ( ခရက်ဒစ်တူ သဂျီး )
ကျုပ်လဲ ဘာသားနဲ့ ထုထားတာမှတ်လို့ 
သဂျီး လုပ်ရင် လိုက်လုပ်မှာပဲ
ကိုပေါက် သွားရင် နောက်က လိုက်မှာပဲ
ရုံးပြင်ကနား မသွားချင်ကြတာတော့ ခုထိပါပဲ၊
ပုဒ်မလေး တွေ မပျောက်သမျှ တိုင်းပြည်ကြီးမတိုးတက်ပါဘူး။
မဆလ ခေတ်တုံးကမှ ရိုးသားတဲ့ ၀န်ထမ်းဦးရေကများသေးတယ်။
နအဖ လက်ထက်မှာတော့ ရပိုင်ခွင့်တောင်းသလိုပါပဲ။
အလုပ်ဖြစ်ရေးပေးတာကို ရေကြည့်ပြီး လိုသေးတယ်နော်လို့ တောင်ပြောခံနေရဆဲ။
ဒီပို့စ်လေးကို ရေးလိုက် ရေးသင့်မရေးသင့်စဉ်းစားရင်းရပ်ထားလိုက်နဲ့
အတော်ကြာခဲ့ပါတယ် ခေါင်းစဉ်လဲ သုံးလေးခါပြောင်းနဲ့
တကယ်ချရေးပြီး ပြန်ဖတ်တော့ ကိုယ်တိုင်လဲ သဘောကျမိပါတယ်
ဦးပေါက်ရေ ! ပုလွေ ဆရာ ကြောင်းပြောလို့ ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ် ရေးလိုက်ပါဦးမယ်။ စကား လက်စုံကြသလို ပေါ့ဗျာ ! အကြောင်းအရာ တစ်ခု ကနေ တစ်ခု ဆက်စပ်ပြောင်းလဲတဲ့ သဘောပေါ့ ခင်ဗျာ ! ဦးပေါက် နောက်က လိုက်ပြီ ! ရေထဲပို့ သလို ဂူထဲလည်း မသွင်းနဲ့ဦးနော်! ဟဲဟဲ !
တခြား ရုံးတွေ က မှ မပတ်သတ်ချင် နေ လို့ ရသေးတယ်။ ဘာ မဟုတ်တဲ့ လူတွေ ၊ ရပ်ကွက်ထဲ အလုပ်မရှိ အကိုင် မရှိ၊ ဝေလေလေ လူတွေ တတ် ထိုင် နေတဲ့ ရ. ၀. တ ရုံး ဆိုတဲ့ ဟာ က အများ စု မပတ်သတ်ချင် ပဲ ပတ်သတ် နေ ရ တယ်။ ဧည့် စာရင်း တို့ ၊ ထောက်ခံ စာတို့ မပျောက် သေး သမျှ အဲဒီ ရုံး တွေ နဲ့ ပတ် သတ် နေ ရ တယ်။ ဟိုတလော ကတော့ ဥက္ကဌ တို့ လမ်း လူ ကြီးတို့ ကို လမ်း သူလမ်းသားတွေ ကို မဲပေးခိုင်း ပြီး ရွေး ကြတယ် ဆိုလား ပဲ။ မြန် မာပြည် ထဲ နေတဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ သား က ဧည့် စာရင်းတိုင်ရ တာ တို့ ၊ ယောက်ျား ရဲ့ ထားခဲ့ တဲ့ မိသားစု ပင် စင် လေး ထုတ်မဲ့ အဘွား ကြီး အို အို ကြီး က နောက် ယောက်ျား မရှိကြောင်း ထောက်ခံ စာ တို့ ၊ ဘာထောက်ခံစာ၊ ညာထောက် ခံစာတို့ ..အဲဒါတွေ ကောဘယ်တော့ ပျောက် မလဲ မသိ။
မှန်ပါတယ် မလိုအပ်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို တစ်စထက်တစ်စလျော့တယ်ဆိုရင်
အသက်ရှုချောင်လာကြမှာ စိတ်ချမ်းသာမှအသေအချာပါ ခင်ဗျာ
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းမှာသင်ရတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်လေ
လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ တို့ရန်သူ လို့ ထင်တာပဲ
အဲဒီထဲကအတိုင်းသာ အခုလူတွေကို ပညာပေးလို့ရရင် ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးနော်
(ဆရာညီပုလေးရဲ့ လီဒိုဟူးကောင်း မင်ခြစ်မှတ်စုများ မှာ ရေးထားတာဖတ်ရတာပါ။)